एजेन्सी, २३ चैत । पुरुष यौनाङ्गको आकार कत्रो हुनुपर्छ ? सेक्समा सन्तुष्टिका लागि लिंगको पर्फेक्ट साइज कति होला ? यस्ता प्रश्नहरुको प्रायः सबै मानिसहरुको दिमागमा खेल्ने गर्छ ।
यद्यपि, परिस्थितिको दृष्टिले लिंगको आकार हरेक महिलालाई फरक पार्छ । अनुसन्धानका अनुसार, फरक फरक माग हुन्छ । हालांकि परिस्थिति के हिसाब से लिंग का साइज हर महिला के लिए अलग-अलग मायने रखता है। रिसर्च के मुताबिक, आकस्मिक सेक्सको क्रममा महिलाहरुका लागि लिंगको आकारको महत्व हुन्छ । जबकि हुक-अप्स पोजिसनका लागि महिलाको लागि ६.४ इञ्चको साइज बढी रोज्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
दाँतलाई सेतो बनाउने ५ घरेलु उपायहरु
चिसो पानीले तपाईको दिमागलाई ठन्डा बनाउँछ
डन्डिफोर हटाउने विभिन्न घरेलु उपाय
यी हुन् धनी बन्ने ५ तरिका, आजैबाट लागु गर्नुस् !
समयबारे गान्धीको जीवनको यो अनौठो घटना तपाईलाई थाहा छ ?
यी हुन् धनाढ्य पति पाउने तरिका, जुनकुरा विशेष क्लासमै सिकाइन्छ !
ख्याल गर्नुस्, पुरुषहरुको यस्तो कुराले घोच्छ महिलालाई !
यी ६ कुरालाई ख्याल गरेर मात्रै बिहे गरौं
तपाईको आँखा कति तीखा छन् ? यी चित्रमा लुकेको कुरा देख्न सक्नुहुन्छ त ?
यसरी पत्ता लगाउनुहोस् आफ्नो बच्चा कति अग्लो हुन्छ भनेर……….
के पैसाले माया किन्न सकिन्छ ?
यी सात कुरा जसलाई जीवनभर गोप्य राख्नुपर्दछ
यी ५ गुण भएका युवकसँग मोहित हुन्छन् युवतीहरु
के तपाईलाई थाहा छ, प्रोफाइल तस्वीरले मानिसको स्वभाव झल्काउँछ भनेर ?